April 11, 2021 - ApannPyay Media
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရတဲ့ လူနာကို အရေးပေါ်ကုသနည်း
April 11, 2021 by ApannPyay Media
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရတဲ့ လူနာကို အရေးပေါ်ကုသနည်း (၁) လေဖြတ်သော လူနာကို ( မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်စေ ) ဖြစ်သော နေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းသယ်မခြင်း မပြုရပါ ။ ထိုသို့ ချက်ခြင်း ရွှေ့ ပြေ ာင်း သယ်ဆောင် ပါက ကား ဆောင့်ခြင်း အစရှိသော လှုပ်ရှားခြင်း ဒဏ်များ ကြောင့် ဦးနှောက် သွေးကြော ငယ် များကို လျှင် မြန် စွာ ပေါက်ကွဲ စေပြီး လူနာ၏ အခြေအနေကို ပိုဆိုး စေပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ရွှေ.ပြောင်းခြင်း မပြုပါနှင့် ။ ( ၂ ) လူနာကို ဖြစ်သည့် နေရာ တွင်ပင် အသာ … Read more
သူငယ်ချင်းရေ ကင်ဆာဆေးတွေ သွင်းနေတုန်းလား?
သူငယ်ချင်းရေ ကင်ဆာဆေးတွေ သွင်းနေတုန်းလား? မှာချင်တယ်(ကင်ဆာဆေးကုသခံယူနေတဲ့သူငယ်ချင်းများသို့) သူငယ်ချင်းရေ ကင်ဆာဆေးတွေ သွင်းနေတုန်းလား? ဓာတ်ကင်တဲ့အဆင့် ရောက်ပြီလား..?၅ နှစ်စာ ဆေးတွေ သောက်နေရပြီလား….? တို့ ကတော့၂၀၁၆. ၉လ ပိုင်းမှာ ကင်ဆာဆေးကို ပထမအကြိမ် စသွင်းရတယ်…ဆေးသွင်းပြီး ၂ရက်ဘဲ ရှိသေးတယ်..ဓာတ်ကင်ဘို့ နေပြည်တော် ကင်ဆာဌာနမှာ စာရင်းစ သွင်းနေရပြီ…အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရ ရင် တို့်အနေနဲ့ ဓာတ်ကင်ဘို့စာရင်းသာသွင်းတာ ဓာတ်ကင်ဘို့ စိတ်ကူးထဲ ကိုမရှိဘူး.. သမားတော် တွေ စိတ်ချမ်းသာဘို့ စာရင်းပေးရုံ သက်သက်..ဓာတ်ကင်ရမှာ အရမ်းကြောက်….ကင်ဆာသမားတွေက ဒုတိယအကြိမ်ဆေးသွင်း တာနဲ့ ဆံပင်တွေလည်း အကုန်ကျွတ်တော့တာ…ကတုံး မြင်ရင်တော့ ကင်ဆာသမားတွေပါ… ကင်ဆာသမား အချင်းချင်းကလည်း ဘဝတူတွေဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွေ့ရင် အလိုလိုရင်ဖွင့်ကြတာထုံးစံ တစ်ခုလိုဘဲ…ကင်ဆာဆေး သွင်းကြရင်း ဘယ်မြို့ကလဲဘာကင်ဆာလဲ…နုတ်ဆက်ကြတော့.. ကနီမြို့နယ်ထဲကတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က ရင်သားကင်ဆာ၂ဘက်လုံးဖြတ်ရတာတဲ့…ဆေး … Read more
အထက်လှန်အောက်လျှောအတွက် ၁ခွက်နဲ့ အစွမ်းပြတဲ့ ဆေးစွမ်းတစ်လက် ကျမတို့မိသားစု လက်စွဲသုံးခဲ့တဲ့ ဆေးနည်းကောင်း တစ်လက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လဲဖြစ်ဖူးပီး သောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျမ ဖြစ်တုံးက ပထမ ဝမ်းချည်းသွားတာပါ။ ၃ ခါသွားပီးတော့ အိမ်သာကနေ ပြန်ထမလာ နိုင် တော့ပါဘူး။ တွဲထုတ် လာရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်သွားရင် အသက်တောင်ပါတော့မလား မှတ်ပါတယ်။ ကျမ အမေက ဝမ်းလျောတာထင်လို့ နနွင်းမှုန့်ဖျော်ပီး တိုက်ဖို့လုပ်တုန်းမှာဘဲ စပီးအန်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ အထက်လှန် အောက်လျောဖြစ်တာမှန်းသိပီး ဒီဆေးနည်းကို လုပ်တိုက်တာပါ။ ဆေးတစ်ခွက်ဝင်ပီးတာနဲ့ ဝမ်သွားတာရော အန်တာပါ လုံးဝရပ်သွားတာပါ။ ဝမ်းသွားထားတဲ့အတွက် အားနည်း သွားတာပဲ ကျန်ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ အစွမ်းထက်လှတဲ့ ဆေးနည်းကောင်းလေးပါဘဲ။ ဆေးနည်းကလဲ လွယ်ကူတာမို့ မခက်ခဲဘဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ အထက်လှန်အောက်လျောဖြစ်လို့ကတော့ ဒီလိုလေးလုပ္ပီးသာ တိုက္လိုက္ပါ။ … Read more
၁၂.၄.၂၀၂၁ နေ့မှာ ခေါင်းဆေး မဂ်လာ ပြုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ
၁၂.၄.၂၀၂၁ နေ့မှာ ခေါင်းဆေး မဂ်လာ ပြုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ ” ဒီနေ့မှာ ခေါင်းဆေး မဂ်လာ ပြုသင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ ” အားလုံးမဂ်လာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြည့်ဝကြပါစေကြောင်းဦးစွာပထမပြောကြားပေးပါရစေ ။ ယခုပြောပြမည့်အရာက နှစ်ဦးအကြို မြန်မာလရဲ့လဆန်း၁ရက်နေ့မှာဦးခေါင်းဆေးမဂ်လာပြုရမည့်နေ့လေးအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဗျာ… ၁၂.၄.၂၀၂၁ခု နွစ် တနလ်ာနေ့ဟာ မြန်မာတို့ရဲ့လအစဖြစ်သောတန်းခူးလဆန်းလဆန်း၁ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာအားလုံး( ရ ) ရက်သားသမီးတွေဦးခေါင်ဆေးမဂ်လာပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ထံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောမကောင်းသောကံအညံ့ဓာတ်များပယ်ပျောက်ခြင်း ကျန်းမာရေးကအစေကာင်းမွန်းခြင်းတနှစ်တာလုံးအကြံအစည်မှန်သမျှထမြောက် အောင်မြင်လာခြင်း လာဘ်လာဘတွေအထူးတိုးတက်ပွင့်လန်းခြင်းကံဇာတာအထူးကောင်းမွန်းခြင်းတွေပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ တရော်ကင်းပွန်းနှင့်ခေါင်ဆေးနည်း မိမိတို့ဈေးမှဝယ်ယူလာသောတရော်ကင်းပွန်းရည်ကို ဖလားသန့်သန့် သို့မဟုတ် ဇလုံးသန့်သန့်လေးထဲထည့်ပြီ တရော်ကင်းပွန်းရည်နဲ့အတူ သပြေ၃ညွန့်လောက်ထည့်ပြီ ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင်ကပ်လှူထားပါ။ ဦးခေါင်ဆေးရမည့်အချိန်မှာ ၁၂.၄.၂၀၂၁ တနလ်ာနေ့ တန်ခူးလ္ဆန်း ၁ရက် နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ၅နာရီအတွင်းဦးခေါင်းဆေးပါ။ အရှေ့အရပ်ကိုလှည့်ပြီ သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ပဌာန်းအကျဉ်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဂုဏ်တော်တခုခုကိုတည်ပြီးမှ မိမိဦးခေါင်ထက်မှနေ၍ တရော်ကင်းပွန်းရည်များနဲ့လောင်းပြီဦးခေါင်းဆေးချပါ။ ထိုကဲ့သို့ဦးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကံအညံ့ဓာတ်တွေပယ်ပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးမဂ်လာချမ်းသာသုခတရားတွေရောက်ရှိလာပါမည်။ မှတ်ချက်… မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် တရော်ကင်းပွန်းရည်နဲ့ဦးခေါင်ဆေးပါ။ … Read more
တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး (၃)လုံး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး (၃)လုံး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ အသက် ၄၀ကျော်လာသည် နှင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ လျော့လာပြီး အရိုးအဆစ် နာကျင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက် နေ့ ည ငှက်ပျော် သီးမှည့် (၃) လုံး စားပေးပါ။ (၂) အစာအိမ် ကင်ဆာသမားများနှင့် အရိုး ကင်ဆာ သမားများ ငှက်ပျောသီး စားပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကို မြန်မြန် သက်သာစေမှာပါ ။ (၃) စိတ်ဖိစီးပြီး စိတ်ညစ်မှု ဝေဒနာဖြစ်လျှင် ငှက်ပျော် သီးမှည့် စားပေးပါ ။ (၄) ကျောက်ကပ် အားနည်း ကျောက် ကပ် နာကျင်မှု အတွက် ပိုတက်စီယံ ကြွယ်ဝသော ဌက်ပျောသီးကို နေ့စဉ် စားပေးပါ ။ … Read more
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီအောင် ဖုန်းအသုံးပြုနည်း(ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အထူးဖတ်သင့်ပါတယ်)
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီအောင် ဖုန်းအသုံးပြုနည်း(ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အထူးဖတ်သင့်ပါတယ်) “ဖုန်း အသုံးပြု သတိပြုရန်နဲ့ ကာကွယ်နိုင်သောနည်းများ” ” အင်တာနက်သုံးခြင်းအတွက် အမြင်အာရုံကောင်းစေရန် ” မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုရာတွင် ဘယ်ဖက်နားကို အသုံးပြုပါ ။ ညာဖက်နားနဲ့ နားထောင်လျှင် မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ထွက်ရှိသော ရေဒီယိုလိူင်း( Mobile radiation ) ဦးနှောက်ကို ပို၍ ပျက်စီးစေကြောင်း သိရသည်။ များသောအားဖြင့် ညာသန်သူများအတွက် ညာဖက်ကို ပိုမို အသုံးပြုသည့် ကို ဆင်ခြင်ပါ ။ ည မှာ ဖုန်း Screen ( အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း )မှ တဆင့် စာဖတ်ခြင်းကအိပ်ပျော်စေဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။အိပ်မောကျစေဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။ Screen ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် အသားအရောင်ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဟော်မုန်းပမာဏ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ညမအိပ်ခင် … Read more
ဆီးချိုရောဂါရှင်များ အာရုံကြောထိခိုက်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လက္ခဏာများ
ဆီးချိုရောဂါရှင်များ အာရုံကြောထိခိုက်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လက္ခဏာများ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ဟာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ မြင့်တက်နေရင် အာရုံကြောများကို ထိခိုက်လာတတ်ပါတယ်။ လူတချို့အတွက်တော့ လက္ခဏာမပြဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြောထိခိုက်မှုဒဏ်ကို အတော်လေး ခံစားရပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေအရ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အာရုံကြောထိခိုက်မှုဒဏ်ကို ခံစားရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် လက်မောင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ ခြေဖဝါး၊ ခြေချောင်းလေးများ စတဲ့ အစွန်အဖျားနေရာတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အများစုဟာ မိမိမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေမှန်းမသိတာကြောင့် ဘာကြောင့် တစ်ချိန်လုံးထုံကျင်ကိုက်ခဲနေရသလဲ နားမလည်နိုင်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ဓာတ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးအတွင်းမှာ ဂလူးကို့စ်ဓာတ်လွန်ကဲနေရင် အာရုံကြောဆဲလ်များ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြား ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ချို့ယွင်းနိုင်တယ်လို့ သုတေသီများက ယူဆကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးချိုတက်ခြင်းဟာ အာရုံကြောများကို သွေးပံ့ပိုးပေးတဲ့ … Read more
ခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ဖရဲသီးကို တတ်နိုင်သလောက် များများစားပေးပါ
ခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ဖရဲသီးကို တတ်နိုင်သလောက် များများစားပေးပါ ဖရဲသီးစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ဖရဲသီးစားပါ။ နှလုံးကို ကျန်းမာစေတယ် – ဖရဲသီးမှာ Lycopene ဓာတ် ကောင်းစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒီဓာတ်က ကိုယ်တွင်း အောက်ဆီဓာတ်တိုးခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို အားပေးပြီး တစ်ရှုးနဲ့ ကြွက်သားတွေ ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်မှု ပေးသလို နှလုံးကိုလည်း ကျန်းမာ အားကောင်းစေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်တယ် – ဖရဲသီးစားလို့ အလေးချိန် ကျတာထက် အလေးချိန် ကျလိုသူတွေ အတွက် အခြား အစာတွေထက် ဖရဲသီး စားပေးရင် အဟာရလည်း ဖြစ်တယ်၊ အဆီလည်း မစားဖြစ်စေပဲ ရှိသွားတာကြောင့် အစားထိုး အစာ အဖြစ် စားပေးနိုင်တာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေတယ် … Read more
ပန်းသီးစိမ်းနဲ့စပါးလင် ဆေးဘက်တကယ်ဝင် ကိုယ်တို့ဖေဖေက ဆိုင်ကယ်Accident ခဏခဏ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒူးခေါင်း က အရွတ်ကွာပြီး အတော်နာ နေ ပုံရပါတယ်။လှေကားအတက်အဆင်း သိပ်မလုပ် ချင်ပါဘူး။ဖေဖေ့ကို ဆေး ခန်းခေါ် လို့့လည်းမရပဲလိမ်းဆေးတွေပဲလူးနေတာ မေမေမဆုံး ခင်ကတည်းကပါပဲ။ ဟိုတစ္ပတ္က အိမ်ရှင်မတို့ အိမ်မှု ကိစ္စ ဗဟုသုတ ဖလှယ်ကြစို့Group မှာအမတစ်ယောက်ပြော တဲ့ သောက်ဆေးလေး ကို သိပ်မခက် လို့ဖေဖေ့ကို ၃ရက်တိုက် ကြည့်တာ အတော် သက်သာတယ်ပြောပါတယ်။ဆေးနည်းကို စင်ကာပူက တရုတ်တွေ အတော်သောက်ကြတယ်ပြောပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အိမ်အကူ လုပ်ဖူးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ပြန်ပြောပြတယ် လို့အဲ့အမက ပြောပါတယ်။ ဆေးနည်းကတော့ ပန်းသီးစိမ်းနဲ့ စပါးလင်ကို ၃ခွက်၁ခွက်ကြိုပြီးအေးအောင်ထားသောက်တာပါပဲ။ အရသာက ချဉ်ချဉ်မွှေးမွှေးလေးပါ။ပန်းသီးစိမ်းက တစ် လုံးကို ၆ဝဝကျပ် + စပါးလင်က … Read more
နွေရာသီမှာ ပူတာသိပေမယ့် သတိလက်လွတ်ပန်ကာဖွင့်ပြီး မအိပ်စေချင်
နွေရာသီမှာ ပူတာသိပေမယ့် သတိလက်လွတ်ပန်ကာဖွင့်ပြီး မအိပ်စေချင် ပန်ကာ ဖွင့်ပြီး အိပ်တာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးအများကြီး ဖြစ်စေနိုင် ရာသီဥတု တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပူပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သာမန်လူတန်းစားတွေအဖို့ ပန်ကာတွေဟာ သုံးတည့်လာပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာ အပူဒဏ်သက် သာစွာနဲ့ အိပ်ပျော်အောင်လို့ဆိုပြီး ပန်ကာတှေကို ဖွင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညဘက်မှာ ပန်ကာဖွင့်ပြီး အိပ်တာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးအများကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး ပန်ကာဖွင့်ပြီးတော့ အိပ်စက်ခြင်း ပန်ကာလေဟာ အခန်းတွင်းမှာပဲ လှည့်ပတ်ပြီး တိုက်နေတာကြောင့် ဖုန်မှုန့်တှေဟာ နှာခေါင်းထဲကနေတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ကြပ်ပန်းနာသည်တှေနဲ့ အလာဂျစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေဟာ ပန် ကာနဲ့ လုံးဝမတည့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် နှလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါရှိသူတှေဟာလည်း ပန်ကာနဲ့ လုံးဝ မတည့်ပါဘူး။ ပန်ကာလေခံလို့ လေဖြတ်၊ ဦးနှောက်သွေး ကြောပေါက်ကျတဲ့အထိ … Read more